Wazi ntoni malunga ne-cryptocurrency oza kutyala kuyo kwiminyaka ezayo? I-Bitcoin yi-cryptocurrency yokuqala eyakhutshwa ngo-2009, emva koko kuye kwavela iindidi ezininzi zee-cryptocurrencies. Ngokutsho kophando, ngaphezu kwe-6,700 kubo kuthengiswa ngokukhululekileyo. Iintengiselwano zikhuselekile kwaye zixhaswa yi-digital "crypto" ledger.
Kweli nqaku, siya kuzama ukujonga kancinci kwixesha elizayo ukwenza uqikelelo malunga nokuba yeyiphi i-cryptocurrency enengqiqo yokutyala imali kuyo, kwaye yeyiphi ilungele utyalo-mali, kwaye masithi Dlala yekhasino online imali yokwenyani Playamo.
Kutheni i-Cryptocurrency idume kakhulu
Unokwenza inzuzo enkulu kutyalo-mali oluncinci. Umhla nezolo, ixabiso le-cryptocurrency liyanyuka. Oku kuphela ukhetho kwabo bafuna ukutyala ixesha elide. Ukususela ngo-Agasti 2021, ixabiso lilonke le-cryptocurrency yi-$ 2.2 yetriliyoni. Uluhlu luyaqhubeka lukhula.
Ngokophononongo lwamanqanaba otshintshiselwano oluphambili lwe-cryptocurrency, iindaba ezimalunga ne-cryptocurrensets sele zidumile okwangoku. Ngaloo ndlela, i-Bitcoin iye yaphefumlela kwaye ibe ngumzekelo wokwamkelwa kwezicwangciso zokuthengisa. Ngaphezu koko, i-bitcoin ifunyenwe yinkwenkwezi yomboniso, kwaye ezinye ii-cryptocurrencies ngokuthe ngcembe ziba yimbindi yengqwalasela.
I-Dogecoin (i-doge okanye i-dogecoin) yi-cryptocurrency eyaqala ukusuka ezantsi kwaye yakwazi ukuthatha indawo phakathi kwee-cryptocurrencies ezine ezidumileyo. Kodwa ke, wonke umntu uyazi ukuba i-cryptocurrency yimali yedijithali apho abasebenzisi banokutyala imali ngethemba lokufumana inzuzo. I-Cryptocurrency ngoku iye yaba yinto eqhelekileyo ye-bargaining chip kunye neyodwa yemiyalelo yezemali esetyenziswa ngokuqhelekileyo. Eyona mali itsha ye-cryptocurrensets iyimfuneko ekwenzeni inzuzo ngotyalo-mali oluncinci.
Ezinye zeeCryptocurrencies zokuTyala ngo-2022
Ukuzingisa (XPRT). Imali iya kwandisa amathuba enkxaso-mali avulekileyo kwaye kufuneka ivumele iimali ezintsha kunye nabatyali-mali ukuba bangene kwimarike. Inani lamathokheni e-XPRT kwiimarike lihlala likhula. Ekupheleni kwe-2024, banokufikelela kwi-1 yebhiliyoni ye-Osmosis (OSMO). Umqondiso wenziwa kwi-platform ye-Osmosis Zone, esekelwe kwiprotocol ye-AMM (i-Automated Market Maker). Le nkqubo inemirhumo yentengiselwano enguziro kwaye ikuvumela ukuba uzenzele ezakho iiphuli zokungabi namali.
IAtlasi yeNkwenkwezi (ATLAS). Le yimetasystem esekwe kwi-Solana blockchain ye-Unreal Injini yomdlalo wenjini. Kule nkqubo, iithokheni ze-NFT ezingenakuphinda zikwazi ukuthengwa kwaye zithengiswe kwiithokheni ze-ATLAS. Ixabiso layo lenyuka nge-12,000% ngoSeptemba.
Gala (GALA) GALA luphawu lokudlala olwenzelwe inkqubo yeMidlalo yeGala, lo mqondiso unokuhlawulwa kwimidlalo, kunye neshishini lokudlala, ngokutsho koqikelelo lokuqala, ngoku lixabisa malunga ne-148 yeebhiliyoni zeedola. Ngoko amathemba okukhula acacile.
Ingqekembe ye-98 (C98). Umakhi ongaphantsi uvumela ukuqulunqwa kweeprothokholi ukuba zisebenze kwiibhloko ezahlukeneyo, zisebenza njengoluhlobo lwesango phakathi kwabasebenzisi, kwaye luxhasa amaqonga angaphezu kwama-20. Ngeli xesha lifutshane lobukho, kunzima ukwenza uqikelelo luka-2022, kodwa iinyanga ezimbalwa zokuqala zibonisa amathemba amahle.
Iimali ezininzi zivela kwi-cryptocurrencies yonke imihla. Nangona uphando oluthile lwangaphambili, akunakwenzeka ukutsho ngokuqinisekileyo ukuba yeyiphi imveliso emiselwe ubomi obude, eya kukhula ngokukhawuleza, kwaye ayiyi kwenzeka. Kuxhomekeke kwithuba.
Kweyiphi i-cryptocurrency oza kutyala kuyo ngo-2022, kunokwenzeka ukutsho kuphela ngenqanaba elithile elinokwenzeka, kwaye esi sidanga sincinci kakhulu. Xa ukhetha i-cryptocurrency yokutyalomali, kuyimfuneko ukuqwalasela izinto ezijoliswe kuyo kwaye ungawuhoyi uluvo lwabarhwebi abanamava.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ukhethe iimali ezintsha, ezingabizi kakhulu zotyalo-mali. Kodwa akufanele uchithe imali eninzi kule nto. Ngamanye amaxesha kufuneka ulinde ixesha elide ukukhula, kwaye kwimeko yokukhetha okungalunganga, ilahleko iya kuba yincinci.
tags Imali 98 (C98), Zemali, GALA, IsiGala (GALA)
IDola yase-US eNgaqinisekanga emva kweNFP Ingxelo Njengoko iCAD inyuka kwiiNkcukacha zeNgqesho
The number of people employed in the I-NFP sector of the United States in November increased by only 210 thousand, which is significantly below expectations of 525 thousand people. So far this year, monthly job growth has averaged 555,000. Total employment fell by -3.9 million, or -2.6%, from pre-pandemic levels in February 2020.
tags KwiDola yaseMelika
Iintlawulo ezihlawulwayo zase-US ezingezizo iifama ezilandela emva kukaPowell, iDola inokuwa kwakamsinya
Kwingxoxo yakhe phambi kweKomiti yeBhanki yeSenethi ngoLwesibini, Jerome Powell, otyunjwe ixesha lesibini njengosihlalo we-Fed, ngokumangalisayo wajongana nesidingo sokuthengwa kwe-asethi ngokukhawuleza, njengoko ukunyuka kwamaxabiso okwexeshana ngoku kubonwa njengento ehlala ihleli.
Impendulo yedola, engazange ifumane nzuzo kwizihloko, yayimangalisa ngakumbi, kodwa iinkunzi azikaphulukani ngokupheleleyo namajitha azo, njengoko idatha yangoLwesihlanu yemisebenzi yase-US inokubonisa elinye ithuba lokuphinda kuphindwe.
Ngokunyuka kwamaxabiso e-PCE engundoqo ebonisa ukuba akukho zimpawu zokwehla kunye nokwahluka kwe-omicron covid entsha ecebisa ukongezwa konikezelo ekupheleni konyaka, inkosi ye-Fed yathumela ngefowuni ukuba ibali elidlulayo liya kukhutshelwa ngaphandle kwingxelo yomgaqo-nkqubo.
Wavuma kwakhona ukuba ngexesha lentlanganiso yomgaqo-nkqubo ezayo, ibhanki ephakathi iya kuxoxa ngokunokwenzeka kwe-bond tapering ngokukhawuleza, eyayicetywe ekuqaleni ukuba iqale nge-15 yeebhiliyoni zeerandi ngenyanga, ukunyusa uqikelelo lokuba isigaba sokunciphisa ibhondi sinokuphela ngaphambi ko-2022 kwaye inzala inokunyuka ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe. Nangona kunjalo, uPowell wathi ibhanki ephakathi iya kugcina iliso elisondeleyo kwiimeko zangoku kwaye ifune ukuqinisekiswa kokuphuma kwedatha engenayo ukubeka iinkqubo zokuqinisa.
Iintlawulo ezihlawulwayo ezingezizo iifama kulindeleke ukuba zande ngokukhawuleza
Ukukhula kwemisebenzi kuqikelelwa ukuba kuya kuba ngama-550k ngoNovemba, ukuhla ukusuka kwi-531k kwinyanga edlulileyo, kunye nezinga lokungaphangeli elilindeleke ukuba lehle ukuya kwi-4.5 yeepesenti ukusuka kwi-4.6 ekhulwini. Ekuboneni kokuqala, amanani anjalo abonakala ahluke kancinane kulawo akhutshwe ngoNovemba, anika abarhwebi isizathu esincinci sokutshintsha izibikezelo zabo zexabiso kwaye, ngenxa yoko, batyhale idola phezulu.
Nangona kunjalo, ukuba izibalo zemisebenzi ziza kuqikelelo olungentla, kunokubonwa njengokuqhubeka kokubuya kwe-Okthobha, inika obunye ubungqina bokuba i-Fed ingaqhubela phambili ngokunciphisa okukhulu ekuthengeni ibhondi kule nyanga ngaphandle kokuba i-omicron ibe ngumthwalo olandelayo woqoqosho lwehlabathi.
Ingxelo yengqesho elandelayo, eza kubhengezwa ngoLwesihlanu, iya kuba yeyona nto iphambili kuqwalaselo. Ubalo-manani oluncomekayo lunokukhuthaza iimarike ukuba ziqikelele ukunyuka kwamaxabiso okuthathu kulo nyaka uzayo, kuvuselele ukunyuka kwedola yaseMelika. Imakethi yezabasebenzi e-United States ikwimo entle, ngokutsho kwamabango angcono-kunokuba ebelindelekile evekini angaphangeli abhengezwe kwangoko namhlanje.
tags IDOLI, Intlawulo engeyiyo yeFama (NFP)
I-USDJPY Market ilindeleke ukuba iHlalise ngaphantsi kweNqanaba lokuQinisekisa
Uhlalutyo lwexabiso le-USDJPY-Disemba 2
Izicwangciso zemarike ye-USDJPY ukuseka ngaphantsi kwinqanaba lokuhlanganisa iindawo ze-112.690 ngenxa yokuphikelela kwabathengisi kwiimarike. Iibhere ziceba ukuseka ukuhamba kwexabiso kwi-bearish order flow kwimarike. Ngapha koko, abathengisi bazimisele ukwenza intshukumo enkulu kwimarike njengoko isantya sexabiso le-bearish siqhubeka ne-trigger. Nangona umzamo wenkunzi yenkomo ekuthatheni ixabiso kwizinga eliphezulu lee-115.500 zone, abathengisi ngoku banqanda amandla exabiso lentengo, ebonisa ukuba i-bullish trend iphelile kwaye iibhere zikhawuleza ukuqhubeka.
Imimandla ebalulekileyo ye-USDJPY:
Iindawo zokuchasana: 115.500, 112.690
Iindawo zokuxhasa: 110.800, 108.860
I-USDJPY yexesha elide iTrend: Bearish
Imarike ye-USDJPY ibonakala ngakumbi emva koluhlu lweentshukumo zamaxabiso kwiindawo ezisezantsi ezibalulekileyo. Ukulandelelana komyalelo wexabiso phakathi kwamanqanaba e-110.800 kunye ne-108.860 iindawo ezibalulekileyo. Ukulandela olu luhlu lwamaxabiso, i-push inike ukuzingisa ngakumbi kwimarike kwaye ixabiso ekugqibeleni liye lanyuka ngaphezu kwe-110.800 yeendawo ezibalulekileyo. Emva kolu vukelo, iibhere ziphinde zagqiba ekubeni zibeke intshukumo yexabiso ezantsi ukuze iphinde ihlolwe phambi kokuba iinkunzi zenkomo zithathe ulawulo.
Ngenxa yoko, imarike yafumana intshukumo enkulu ye-uptrend njengoko ixabiso laphuka kwinqanaba elibalulekileyo le-112.690. Ixabiso kwimarike liqalise enye inotshi yokuqokelela ngaphezulu kweli nqanaba. Oku kwanika imbonakalo kuzo zombini iinkunzi zenkomo kunye neebhere njengoko amandla exabiso ayebonakala phakathi kwazo. Itshathi yemihla ngemihla isinika imeko yemarike njengoko i-USDJPY iceba ukuseta imiyalelo yexabiso phantsi kweendawo ezibalulekileyo ze-112.690. I-MACD (i-Moving Average Convergence Divergence) Isalathisi sibonisa iimpawu zexabiso lokuwela omnye komnye njengoko lilungiselela ukuba uqhubeke phantsi ngaphantsi kwe-0.00 yezinga.
Uluhlu lwamaxabiso amaxabiso lubonwa kwisikali setshati yeeyure ze-4 njengoko iinkunzi zeenkomo kunye neebhere zisebenzisa uxinzelelo kwiimarike. Ngobukho babo, banempembelelo enamandla. Imigca ye-MACD ngokucacileyo ingaphantsi kwinqanaba le-0.00 njengoko ixabiso lilungiselela ukuhamba phantsi. Nangona kunjalo, i-Parabolic SAR (Yeka kunye noBuyisela umva) ibonisa amachaphaza alandela i-uptrend kuba intengiso iya kulungiselela ukutsalwa emva phambi kokuba iibhere zicwangcise ukuthengisa ngaphantsi kwenqanaba lokudityaniswa.
I-NZDUSD Iphumeza ipateni yayo ePhambili ePhezulu ukutyhala ngakumbi ezantsi
Uhlalutyo lwexabiso le-NZDUSD - ngoNovemba 29
I-NZDUSD yenza ukubunjwa kwayo okuphindwe kabini ukutshona ixabiso libuyele kwi-0.68000. Ekubeni ixabiso likhuphukele kwinqanaba eliphambili le-0.71500 ngo-Oktobha 20, imarike ayikwazanga ukumelana noxinzelelo lweebhere. Imarike inokubonwa iqokelela kumanqanaba amabini abalulekileyo ukuzama ukunqanda ukuwa kwexabiso. Ukuqokelela kwexabiso kunokubonwa kwi-0.71040 kunye ne-0.69880, kodwa oku akuyeki ukuwa kwexabiso njengoko i-NZDUSD iqhuba ukubunjwa kwe-bearish.
Amanqanaba aphambili eNZDUSD
Amanqanaba okumelana: 0.69460, 0.71500
Amanqanaba enkxaso: 0.68000, 0.65330
Imakethi ibiphantsi kwexesha lodibaniso olumandla kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ukusukela ngoJuni 16, 2021, ukuya kuthi ga ngo-Agasti 2021. Emva koko, imarike yaqhambuka yaya kutsho kwi-0.68000. Nangona kunjalo, iinkunzi zenkomo zatyhalela phezulu imarike, zityhoboza kumanqanaba amaxabiso amaninzi ukuya kuthi ga kwi-0.71500, apho imarike yaliwe. Okulandelayo kukuhla malunga nenqanaba elibalulekileyo le-0.69460.
I-NZDUSD yayiza kuphinda ibuyele kwi-0.69460, ngeli xesha iphule ukuchasana kwi-0.71500. Uxinzelelo lwe-Bearish luphinde lwaqala kwimarike kule ndawo njengoko ixabiso liqhuba ukwakheka kwepateni ephindwe kabini yaphezulu. Amaxesha amafutshane okuqokelela kwenzeka kwi-0.71040 kunye ne-0.69880, kodwa babengenamandla okumisa ukuhla kwimarike. Ixabiso ekugqibeleni liqhekeza i-neckline ye-double top pattern kwaye ihla ibuyele kwi-0.68000.
I-NZDUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: UkuQala
Ukusabela kwinqanaba elibalulekileyo langoku le-0.68000 liya kugqiba i-trajectory elandelayo yemarike. Ukuba ixabiso liwela ngaphantsi kwezinga, i-NZDUSD kulindeleke ukuba iwele ngakumbi kwi-0.65330. Kwimeko echaseneyo, ixabiso liya kubuyela kwi-0.69880. Isalathiso saMandla aManyanisiweyo sijikeleza ngoku sijikeleza ummandla othengisiweyo.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Ulindelo lweNtengiso, NZDUSD, Price Action, Uhlalutyo Technical
← Entsha izithuba1 2 ... 102 abaDala izithuba →